Lapan'i Buckingham, fitsidihana mpanjaka any London | Vaovao momba ny dia
Lapan'i Buckingham, fitsidihana mpanjaka any London
Mariela Carril | | mpitarika, Londres
Londres Manana manintona maro izy satria tanàna manan-tantara sy tena cosmopolitan, saingy tsy isalasalana raha mpanjaka ny anao dia tsy azonao atao ny tsy mahita ny fomba fijerin'ny Buckingham Palace. Ny lapa Buckingham kanto.
Izany no trano ofisialin'ny Mpanjakavavy Elizabeth II ao an-tanàna ary koa, izany dia iray amin'ireo lapan'ny mpanjaka vitsivitsy any Eropa honenana ankehitriny. Mazava ho azy, tsy ny rehetra no misokatra ho an'ny besinimaro, fa ampy hanaovana fitsidihana any Londres zavatra manokana.
1 Lapan'i Buckingham
2 Tsidiho ny lapan'i Buckingham
Ny lapa dia any Westminster ary ny ampahany tranainy indrindra dia nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 1700. Tamin'ny faran'ny taonjato io vao nividianan'ny Mpanjaka George III ilay trano hivadika azy ho trano tsy miankina amin'ny Mpanjakavavy Charlotte ary dia natao hoe Tranon'ny mpanjakavavy.
Ny fanovana lehibe voalohany, amin'ny lafiny habe, dia natao tamin'ny taonjato faha-XNUMX: elatra telo niseho manodidina ny tokontany afovoany ary araka izany ny lapa ankehitriny dia lasa fonenan'ny mpanjaka anglisy taorian'ny nahazoana ny seza fiandrianan'ny Mpanjakavavy Victoria tamin'ny 1837. Nandritra ny fotoana niainan'ny vadiny, Prince Albert, velona ny lapan'ondry, nisy fifehezana izany ary tonga trano misy baolina sy hetsika, saingy tamin'ny fahafatesany dia lasa ny mpanjakavavy ary nandalo taona maro ny fanaovana tsinontsinona.
fa tahaka ny ahoana ny lapan'i Buckingham? eFA 108 metatra ny sakany 120 metatra ny halaliny ary 24 metatra ny haavony. Totalin'ny 77 metatra toradroa ny velarany, kely kokoa noho ireo lapa malaza hafa toa ny Royal Palace of Madrid na ny Quirinal Palace any Roma. eFA Efitrano 775 eo anelanelan'ny birao, trano fidiovana, efitrano fandriana sy efitranom-panjakana, paositra, efitrano fandidiana, atrikasa firavaka, dobo filomanosana ary sinema.
Manodidina ny lapa dia misy midadasika zaridaina misy farihy tafiditra. Io no zaridaina tsy miankina lehibe indrindra any Londres ary toerana anaovan'ny antoko fahavaratra mpanjaka. eFA 16 hektara raha atambatra ary mazava ho azy, dia misy helipad sy kianja tenisy.
Ao amin'ny zaridaina sy eo akaikin'ny lapa no ahitanao ny kalesin'ny mpanjaka, ny Royal Mews ary eo ny Mall, lalana mankany amin'ny lapan'ny mpanjaka izay vita tamin'ny 1911 ho toy ny zava-kanto fahatsiarovana an'i Queen Victoria, izay mamakivaky an'i Saint James Park ary tonga am-pahatsorana ny Fahatsiarovana an'i Victoria. Isaky ny fahavaratra amin'ny volana jolay dia olona an'arivony no asaina handray anjara amin'ny fety zaridaina ary eto ihany koa no ahitanao ny fiovana malaza an'ny Changing of the Guard, isan'andro eo anelanelan'ny aprily sy jolay.
Tsidiho ny lapan'i Buckingham
ny Efitrano Fanjakana misokatra ho an'ny besinimaro mandritra ny folo herinandro isaky ny fahavaratra ny lapa: manomboka ny 20 Jolay ka hatramin'ny 29 septambra 2019, ohatra), ary andro vitsivitsy voafantina manokana amin'ny ririnina sy lohataona.
Inona avy ireo toerana azo tsidihina ao amin'ireo efitrano ireo? ny White Drawing Room, ny seza fiandrianana, ny Portrait Gallery, ny Ballroom, ny Grand Staircase, ny zaridaina, ary ankoatra izany, ny fanovana ny mpiambina.
Ny efi-panjakana dia ny efi-panjakana misy ny mpanjakavavy sy ny fianakavian'ny mpanjaka mandray ny mpitsidika azy amin'ny fotoana ofisialy. Misy Efitra 19 Izy ireo dia voaravaka araka an'i George IV ary natsangan'i John Nash tamin'ny fanovana azy avy amin'ny trano fonenana mankany amin'ny lapa tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Misy asa-kanto na aiza na aiza.
El Efitra fanaovana sary fotsy Iray amin'ireo efitrano fianarana lehibe indrindra izy io ary miasa a fandraisana ara-panjakana. Ny haingon-trano dia avy amin'ny Carlton Residence ny ankamaroany ary misy porcelana Sèvres maro fotsy sy manga. Misy latabatra Riesener izay nino fa an'ny iray tamin'ireo zanakavavin'i Louis XV, fatana misy sarin'i Queen Alexandra, ary piano Erard. Tsara tarehy. Misy koa ny Gallery of Artworks, 47 metatra, miaraka amin'ny sanganasan'i Canaletto, Van Dyck, ary Rubens maro.
La Efitra seza fiandrianana manana ny sonian'i John Nash ihany koa izy: misy seza fiandrianana roa, ny seza fanjakana, nampiasaina tamin'ny fananganana mpanjakavavy sy ny vadiny tamin'ny 1953, ary koa ireo seza izay nisy tamin'ny fanjonoana hafa sy ny tenany seza fiandrianan'ny Mpanjakavavy Victoria. El Efitra fandihizana Goavana izy io ary vita tamin'ny 1855. Sakafo ofisialy no tanterahina eto androany fa misy ireo seza fiandrianana izay nanatratrarana mpanjaka Edward VII sy ny Mpanjakavavy Alexandra tamin'ny 1902.
La Grand tohatra io no làlana mankamin'ny efitranon'ireo Fanjakana. Izy io koa dia namolavola John nash maka aingam-panahy avy amin'ny teatra London. Betsaka ny sarin'ny fianakavian'i Queen Victoria eo an-tampony ary manaitra izany. Misokatra ihany koa ny Garden Garden amin'ny fahavaratra, na dia mitsidika aza ianao amin'ny hariva dia tsy azon'ny besinimaro atrehana izany. Azonao atao ny misoratra anarana amin'ny fitsangatsanganana manokana hahafantarana azy bebe kokoa satria 16 hektara no misy azy.
El Fanovana ny mpiambina fampisehoana maharesy lahatra izay atao amin'ny 11 ora Alatsinainy, Alarobia, Zoma ary Alahady mandritra ny fahavaratra. Mba tsy hahadino izany dia afaka mitsidika ny tranokalan'ny tafika britanika ianao satria ivelan'ny fahavaratra dia misy andro sy fotoana hafa.
Etsy ankilany dia ny Royal Mews, ny garazy an'ny mpanjaka aiza ny fiara sy ny kalesy. Ity tranonkala ity sokafy manomboka ny volana febebily ka hatramin'ny novambra isan-taona ary ho hitanao ny kalesy volamena, ny soavaly, ny kalesin'andriana izay nampiasaina tamin'ny jobily mpanjaka, ny akanjo nentin-drazana ary nitaingina kalesy mihitsy aza ary naka sary. Ho fanampin'izay, misy fivarotana fahatsiarovana miaraka amin'ny kilalao, boky ary biby tototry.
Ary farany, ao amin'ny Buckingham Palace dia afaka mitsidika ny Galerie an'ny mpanjakavavy misy sary hosodoko, fanaka tsy fahita firy, zavatra haingon-trano ary fitambarana sary tsy mampino sy lehibe. Ity taona ity a fampirantiana manokana natokana ho an'i Leonardo Da Vinci, eo anelanelan'ny 24 Mey sy 13 Oktobra. Rehefa lasa ny 500 taona taorian'ny nahafatesany dia manodidina ny 200 ny sary nataony, izay fampirantiana manan-danja indrindra an'i Leonardo tao anatin'ny 65 taona.
Fampahalalana azo ampiasaina amin'ny fitsidihana ny lapan'ny Buckingham
Misy karazana tapakila isan-karazany. Ny parakeet isaky ny olon-dehibe dia 24 pounds, ny zaza latsaky ny dimy taona dia tsy mandoa ary avy eo misy ny tapakilan'ny fianakaviana (olon-dehibe roa ary zaza telo), ho an'ny 61 pounds. Ny ankizy hatramin'ny 50 taona dia mandoa 16 pounds.
Ahoana no ahatongavana any: azonao atao amin'ny lamasinina na metro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Londres » Lapan'i Buckingham, fitsidihana mpanjaka any London